ELM (ELM, KARAGACH) WAA LA DABOOLAY: GURYAHA WAXTARKA LEH IYO CODSIGA JILIF IYO CALEEMO - DAAWADA DADWEYNAHA
Waa maxay faa'iidooyinka caleemaha iyo caleenta?
Elm grabber waxaa loo yaqaanaa sifooyinka bogsashada leh waxaana loo isticmaalaa daawada. Maqaalkani wuxuu sharxayaa sifooyinka guud ee geedkan iyo kiisaska isticmaalka dawooyinka dhaqanka iyo dhaqanka. Sidoo kale, dareenka akhristayaasha waxay bixiyaan macluumaad ku saabsan sida loo soo iibsado alaabta ceeriin ee caafimaadka.
Elm grabber - Tani waa geedka dilka ah, oo ku badan Yurub, Bartamaha Aasiya iyo Caucasus. Ugu badnaan wuxuu gaari karaa 25 mitir dhererka wuxuuna koraa 300 sano. Geedo yar yar ee ubaxyada guga hore leh ubax yar oo cagaaran-cagaaran oo ku koraya labadooda. Ka dibna, meeshii ubax, miraha cufan ah ayaa la sameeyay, oo ay ku jiraan lionfish oo leh xuubyo oo ay ku jirto wax yar oo gudaha ah. Geedku waxay leeyihiin laan dheer, oo leh cufan calaamadeysan. Caleen caan ah si sahlan ayaa loo aqoonsan karaa sida muuqata, qaabka aan caadiga ahayn.
Ma taqaanaa? Elm waa warshad aad u qoto dheer: taariikhdeeda waxay dib u dhacdaa ilaa 40 milyan oo sano!
Qaybaha kiimikada ee geedkan waxaa matala waxyaabo badan oo kala duwan. Catechins, leucoanthocyanidins, triterpenoids, tannins, steroids iyo acids carbonylic acids ayaa ku jira koofiyada. Caleenta qani ku ah vitamin C, flavonoids iyo acids carbonylic acids.
Waa maxay elmil waxtar leh
Daawooyinka, oo ay ka mid yihiin caleemaha cufan, waxay leeyihiin anti-bararka, antimicrobial, bogsashada nabarka iyo saameynta duriinka. Nidaamka daawada elm ee daawada waa mid aad u ballaaran, waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo iskudhafyada, cudurrada maqaarka, waraabowga, cudurada caloosha, iyo sidoo kale in ay caadi u noqdaan dheef-shiid kiimikaad, nidaamka wadnaha iyo qanjirka thyroid.
Ma taqaanaa? Qoryaha Elm ayaa leh iska caabin xoog leh oo qoyaan iyo qoyaan. Waxay barteen sida loo isticmaalo hantidan Europe dhexdhexaad ah - waxay ka soo saareen farshaxanka ka soo gooyay cirifka, waxayna dhigeen tuubooyin biyo ah.
Sifooyinka bogsashada ee elmiska waxaa loo isticmaalaa daawada dhaqanka iyo dhaqanka labadaba. Iyadoo ay saldhig u tahay, decoctions daawo, infusions, shaaha iyo xitaa qubeyska ayaa la sameeyey.
Elm Root iyo Bark loo isticmaalo diyaarinta decoction, loo isticmaalo sida kareemo cambaarta iyo nabarrada nadiifka ah, iyo sidoo kale daaweynta waraabowga. Decoction ah ee xididka waxaa loo arkaa mid waxtar u leh dagaalka ka dhanka ah kansarka. Wixii diyaarinta, jilif ama xididdada waxaa lagu shubay biyo karkaraya iyo wax yar la kariyey. Kadibna sii waqti si aad u dillaacdo, si loo yareeyo mugga qeybta. Si kastaba ha ahaatee, decoction waa mid aad u xoog badan, sidaa daraadeed biyaha ayaa lagu darayaa qadarka asalka ah. Maraq ayaa lagu sifeeyaa soodhoweynta xiga oo aan ka badnayn laba jeer maalintii, qiyaasta ugu badan ee maraq - hal qaado.
Marka cambaarta waxaa sidoo kale loo isticmaalaa enoteru, euphorbia, berrito, sunberry, dodder, blueberry, xayawaanka qorista, bocorka, monica, dhagxaanta madoow.
Shaaha, oo ku dulsaaray jilifWaxaa loo isticmaalaa daaweynta xanuunka qumanka iyo qumanka. Si aad u diyaariso hal qayb oo biyo karkaraya ku shub 10 g oo jilif ah kuna adkeyso 5 daqiiqo. Waxaad cabbi kartaa oo doorbidi kartaa malab. Marka lagu dhawaaqo xayawaanka shahwada ah ee loo yaqaan 'coagemid' waxaa loo qaataa gudaha oo keliya, laakiin sidoo kale loo isticmaalo qashinka. Isku dariddu waxay si fiican u dillaacday rasaasta oo ay sababtay cudurka ku yaal xagga dambe ee cunaha.
Haddii ay dhacdo dhuun xanuun, acidic, toonta, ash buur, tincture of propolis, corkberry, physalis, Baix caleen, raspberry waxaa loo isticmaalaa.
Faleebo waxaa loo isticmaalaa caloosha oo ah calool jilicsan oo ka sameysata cadaadis. Si aad u diyaariso faleebo waxaa inta badan loo isticmaalaa caleemaha la qalajiyeykuwaas oo u baahan in la buuxiyo biyo iyo in yar ku hay dabka, laakiin ha karkarin. Kadibna isku dar ah ayaa la isku shaandheeyaa ilaa saacad iyo sifeeyaa.
Marka calool-galinta ay ka caawiso caleenta casaan, jilicsanaan, caleemo, cagaarshow, viburnum, isbinaajka, qolka hollywood, nasturtium, rootiga.
Daawada dadweynaha waa mid baahsan bogsashada quraaradaha. Waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cudurrada maqaarka, tusaale ahaan, xoqista, isnadaamiska, finan yaryar, iwm. Bukaanku wuxuu u baahan yahay in lagu waraabiyo isku dhafka daawada ama si buuxda loogu qoynayo isku dhafka. Boorsooyinka degaanka waxay waxtar u leeyihiin daaweynta cagaarshowga, siday u kala horreeyaan, tani waxay u baahan tahay wakhti go'an oo lagu fadhiisanayo baaquli yar oo buuxa xal.
Waa muhiim! Is-daaweyntu marwalba ma tarayso qofka. Talada dhakhtarka waa in ay noqoto mid muhiim u ah go'aaminta daaweynta.
Ma jiraan wax khilaaf ah?
Wax ka soo duubay daawooyinka dufanka leh iyo fiyuusyada daawada ma laha wax iska-horimaad. Marka laga reebo kiisaska xasaasiyadeed ee shakhsiyadeed oo aan la isticmaalin.
Geedka Elm waxaa ku jira waxyaabo daaweyn ah oo loogu talagalay ilaalinta kuwaas oo ay lagama maarmaan tahay in la ogaado hababka diyaarinta saxda ah ee alaabta ceeriin ah, sida jilif iyo caleemo. Elm bark waxaa laga soo gooyay geedo yar yar guga hore iyo meel lagu dhajiyo aaladda si fiican u qalajin ilaa gebi ahaanba qalalan. Jilif ee geedka yar yar waxaa lagu kala soocaa dusha sare ee dusha sare, halka geedaha qaangaarka ah ee jilifku uu yahay mid adag, daboolaya dildilaacyo iyo grooves. Caleemaha waxaa la goostay bilowgii xagaaga waxayna ku qalajiyeen hawada furan ee hooska. Waa la kaydin karaa lana isticmaali karaa laba sano.
Waa muhiim! Cunto cusub oo caleenta ah ayaa loo isticmaali karaa qorshe. Waxaa si fudud loogu dabaqayaa boog cusub ama boogta aan wakhti dheer ku bogsoon.
Elm grabber ayaa si toos ah u tilmaamaysa geedaha bogsashada leh leh tiro balaadhan oo ah guryaha muhiimka ah. Tani waa qalab nabadgelyo leh oo loo isticmaali karo, iyada oo ku xiran talooyinka dhakhtarka joogtada ah iyo in aan ka badneyn heerarka qiyaasta.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Daawada dadweynaha 2020